Nzvimbo Dzinopisa muSeoul
Kwokuenda uye chii chekuita?
Iwe unogona kujairana nemazita Itaewon, Myeongdong kana Hongdae, asi iwe unonyatsoziva rudzi rwezvinhu zvaunogona kuita munzvimbo idzi? Iwe uchatsvaga mune ino blog tsananguro uye zviitiko zvezvinonyanya kuzivikanwa uye zvinopisa nzvimbo muSeoul! Naizvozvo, kunyangwe kana kugara kwako kuSeoul kupfupi, unogona kukwanisa kusarudza kuti ndedzipi nzvimbo nzvimbo dzaunoda kushanyira uye ndedzipi zvinhu zvaunoda kuita ikoko!
Hongdae ndiyo inonyanya kupisa nzvimbo yevechidiki vanoshanyira Seoul. Iyi nharaunda yevadzidzi iri padyo neHongik University uye iwe unogona kutora subway, mutsara wechipiri kuenda unoshanyira ino inopisa nzvimbo. Iwe uchawana zvakawanda zvezvinhu zvekuita, kubva kunotenga kuenda kukaraoke, kuenda kunodya chikafu chinonaka mumaresitorendi, ayo anowanzo kubhadhara zvakanyanya. Kazhinji yenguva, iwe uchawana mukana wekubatsira kune kurarama bhazi kana vatambi vachiita zvimwe zvinoshamisa choregraphies pane kpop nziyo. Nzvimbo iyi inokosheswa kwazvo pakati pevashanyi asiwo pakati pevanyori. Iwe unogona kuenda muchiedza chemasikati kana manheru, iwe unogara uchitsvaga zvinonakidza zvinhu zvekuita.
Kana iri Itaewon, iyi inzvimbo inopisa chaizvo muSeoul uye zvakatonyanya mushure mekudzokororwa kwemutambo wakabudirira "Itaewon Class" iyo yakaunza kunyange vashanyi vakawanda munzvimbo iyi. Itaewon idunhu repasi rose maunogona kuwana maresitorendi kubva kunhivi dzose dzepasi, musanganiswa wetsika uye zvitendero. Chokwadi unogona kuwana Seoul yekutanga mosque muItauon, yakakomberedzwa nezvitoro zvehalal uye maresitorendi. Asi pamusoro pezvose, Itaewon yakakurumbira yekuita mabiko uye kutamba. Chokwadi kune matani emabhawa, makirabhu uye karaoke. Ndokusaka dunhu iri richidikanwa kwazvo nevatorwa uye Korea.
Myeongdong ndiyo inofanirwa-enda nzvimbo kana iwe waronga kuita zvekutenga uye nekuunza zvipo uye zvipo kushamwari dzako nemhuri. Nomuzvarirwo, iwe unogona kuwana zvese zvaunoda imomo uye nezvimwe! Uye kune vanoda zvigadzirwa izvi paradhiso yako, sezvo ivo vari mazana emhando dzekutengesa kubva kune inozivikanwa kune isingazivikanwe. Yiwe unowana zvese zvauri kutsvaga. Uye chakanakisa chikamu chacho, ndechekuti kune chikafu chemumugwagwa chakakukomberedza! Iwe unogona kunakidzwa nekutenga uchidya kudya kwechiKorea kusati kwamboedza, sezvakaita Egg Bread kana Tornado Potato.
Gangnam zvinoreva kuti 'yekumaodzanyemba kwerwizi, sezvairi pasi peRwizi rweHan. Gangnam ndiyo fashoni, chic uye yemazuva ano pakati peSeoul yakazara zvinonakidza zvinosanganisira kutenga, maresitorendi uye masiketi. Gangnam inozivikanwa chaizvo kune vanoda zvekutenga. Unogona kuwana akakura zvitoro zvemahara senge COEX, uye akakwira-enda magadzirirwo ekugadzira. Kana iwe uchifarira mumhanzi weKorea (K-pop), unogona kuwana mamwe ma Kpop mumahofisi akaita seBighit Entertainment, SM Town, JYP Varaidzo… Husiku husiku munzvimbo ino zvakare rakabatikana uye rine moyo nehupfumi hwehusiku mabara uye mabara, ichiita iyi nzvimbo nzvimbo yakanaka kwazvo yekutamba uye kunakidzwa neupenyu kusvika mambakwedza!
Han Rwizi nenzvimbo dzakakomberedza iri pakati peSeoul vachiparadzanisa guta muna 2. Iyi inzvimbo inozivikanwa kune vagari veguta. Nzvimbo iyi zvirokwazvo irwo rudzi rwekushanya kwekuenda kusati kwasvika pasina kukosha kwekuronga rwendo rwako pamberi. Unogona kuzorora uye kunakidzwa nenguva yakanaka nemhuri yako, shamwari uye nevadikani mumapaki akati wandei akatenderedza. Nekuti oTher vanhu vari kuda zvakati wandei zve adrenaline rusero, unogona kunakidzwa nemvura mitambo kana bhasikoro rakakwira parutivi rwizi. Kunze kwezvo, kana iwe uchinge uchinzwa nzara iwe unogona kuti chikafu chako chiunzwe kwauri munzira!
Dunhu reInsadong, iri pakati peguta reSeoul, inozivikanwa kwazvo pakati pevatorwa nekuda kwezvitoro zvakawanda uye maresitorendi. Pamusoro pezvo inozivikanwa nekuda kwenzira dzayo uye yakasanganiswa yenhoroondo uye yemazuva ano mamiriro ekunze aunowana ipapo. Iyo inzvimbo yakasarudzika yeSeoul iyo inomiririra zvechokwadi yapfuura yeSouth Korea. Around Insadong dunhu, unogona kuwana dzimba dzoumambo kubva panguva yaJoseon. Art zvakare ine nzvimbo inotonga muInsadong. Nzvimbo dzakawanda kuratidzira marudzi ese eumhizha kubva kurongedzo yechinyakare kusvika kuzvifananidzo zvinowanikwa kwese kupi. Uye zvakare, dzimba dzetsika dzetiye uye maresitoreti ndiyo nzvimbo dzakakwana kuti upedze kushanya kwedunhu rino ..
Yakanyorwa naSoukaina Alaoui & Caillebotte Laura
Share on FacebookShare on Facebook TweetShare on Twitter Share musi WhatsAppShare musi WhatsApp kubayirira naroShare musi Pinterest Share musi LinkedInShare musi LinkedIn
Zita * Email * Website